5 Of The Best Shopping nehoro In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Of The Best Shopping nehoro In Europe
Paaifamba kwose, isu tose vanoda mukana kuenda kunotenga! Zvinofadza yakasiyana mune imwe nyika, handitika? Kana totaura Europe, kunotenga hainyadzisi. Haangooni here kuva nomukurumbira maguta kunotenga akadai London uye Milan, inotova nenzvimbo zhinji dzekutengesera dzinopa zvikwereti zvakakura pamugwagwa wepamusoro kusvika kumagumo emhando yepamusoro. Below isu umboo 5 Of The Best Shopping nehoro In Europe.
Ladies, ungada kuva zvishoma rokuchinja kuti munhurume wako abvume kufamba navo kudya, asi nechipikirwa akagadzira zvisiri kwakaderedza mitengo, zviri zvachose zviripo. Uye kana hubby kana mukomana havana chokwadi, kuti nzira yokubudisa nemisha vari kumusha zvakawanda kofi zvitoro apo vanogona kugara uye murinde yakaisvonaka vanhu vachigere tenga kusvikira anodonha!
Barberino Designer Outlet, Itari
The Outlet riri pamusoro 30 ? km kubva Florence uye ingasvikwa nyore nechitima kana motokari kana nebhazi inenge hafu yeawa. The Barberino Designer Outlet ndiwo musha mumwe kunotenga: munzvimbo ine Suburban nharaunda, rinotsvaka seguta duku zhinji “dzimba” parutivi kuti tavatepo zvitoro. Pakati zvakanakira munhu nzira yokubudisa yakafanana Barberino Mugadziri Outlet hadzina yakakwirira wevasungwa, wedzimba mikuru pezvitsiga zvishoma nharaunda.
Uchawana Italian uye dzomunyika pezvitsiga akakurumbira akadai Prada, Dolce & Gabbana, Mugabe Zimbabwe, Patrizia rhodesia shona, Michael Kors, Pinko, Furla, but many international ones such as kufembera, Twin Set, gogonera, Hugo Boss, Nike, uye Adidas, to name a few among the best known. Kana uchitya kuti vakarasika uye paunotaura kufarira muchiso, achifamba kupinda pakati kumashopu muchawana akasununguka, hwakadzama mepu yacho Outlet.
Nei isu kusarudza kuwedzera ichi mungoro yedu Best nehoro mu Europe? The zvitoro vanovimbisa discounts ose 30 kuti 70% zvichienzaniswa kuti kutengesa mutengo munhuwo zvitoro uye kazhinji pane zvakawanda chaiwo kushambadza! Kana munoda guru pezvitsiga, iwe chete kumhanya chete ngozi yokuwana zvikuru zveefa, kubata iro rokwe kana bhegi, kana bhutsu idzo dzawainge waona nemutengo wakakwirira muchitoro cheguta.
Bicester Village, nyika dzakabatana
Bicester Village ane zvose zvauri kutsvaka kana totaura discounted mugadziri kunotenga. Takawedzera Bicester mungoro yedu Best nehoro mu Europe pamazita sezvazviri mumwe pamusoro hwokusanyara chitoro dzokugara muUK. Zviri pakati zvikuru nevanhu mushanyi dzokugara muEngland vatorwa, pamwe Buckingham Palace uye neShongwe London.
Hazvina chete vashanyi, Zvisinei. Fashion vapepeti uye venhau vari kugara vashanyi uye ndizvo Kate Middleton, Duchess of Cambridge. Akanga kamwe makwapa kutenga pijama nokuda Prince George. Ungave uri youmambo kana mufashoni mupepeti, uyo haadi mutswanda?
La Vallee Village, Serris, Furanzi
Discover rakasiyana kunotenga ruzivo mune imwe panze marongero ari La Vallee Village pedyo Paris. Kune zvinopfuura 110 boutiques munyika inozivikanwa dzakawanda fashoni. Kunewo mararamiro pezvitsiga chipiriso zvavaimboita mwaka muunganidzwa pa kwakaderedza mitengo, gore rose.
La Vallee Village ndeimwe Best Shopping nehoro mu Europe. Zviri musha nomukurumbira mavanga uye anopa kusarudzwa nokungwarira curated mabasa kuitira vaenzi kunakirwa chisingakanganwiki zuva kubva.
Musha ndewe kumba kune zvinopfuura 110 boutiques ose nomukurumbira pezvitsiga kusanganisira: Armani, Calvin Klein, Carven, Charles Tyrwhitt, CH Carolina Herrera, chitima, Diane Von Furstenberg, Fred Perry, Furla, kufembera, Hackett, Jimmy Choo, Kenzo, Longchamp, Marni, Michael Kors, Moncler, Paul & Joe, Paul Smith, Poiray, Roberto Mugabe Zimbabwe, Salvatore Ferragamo, S.T. Dupont, Sandro, Superdry, Ted Baker, Tods, Tommy Hilfiger, The Kooples, Tumi, UGG, Vanessa Bruno, Yves Salomon, Zadig & Voltaire uye akawanda zvekuti hatikwanise kuvadoma vese.
Serravalle Designer Outlet, Serravalle pedyo Milan, Itari
A mazita Best Shopping nehoro mu Europe haagoni kusiya kubuda Milan! Kana uri kutsvaka yakakwirira magumo kunotenga, Milan inowanzove iri pamusoro pezvinyorwa zvevanhu vakawanda. Wanga uchiziva here kuwana bargains uri vakapiswa kunotenga zvakare? Shanyira Serravalle Mugadziri Outlet nokuda discounts pamusoro guru uye refu mumugwagwa fashoni pezvitsiga.
Iri mumwoyo Gavi zvikomo. Hwakabatana ne zuva chomuruki bhazi basa kubva Milan (navi nguva approx. 50 maminitsi). Serravalle Designer Outlet ndiyo largest outlet in Europe vakazvitsaurira kuna nyika hwomutambarakede kunotenga. mukati, pamusoro pe 11 dzokugara kuravidza. zvinosanganisira cafes uye mumaresitorendi. Shopping vanoda achawana kupfuurisa 230 zvitoro. All vakazadzwa yakanakisisa dzakawanda pezvitsiga, ndinoiitawo hombe zita Italian mugadziri Labels kusanganisira Casadei, Iceberg, uye Missoni.
Washington Village, Wurzburg, Jerimani
Nakidzwa kushanyira Wurzburg, remabhuku maguta German uye UNESCO World Heritage Site. Explore kwayo nhoroondo nzvimbo uye zvivako ipapo kubata zvakanakisisa bargains panguva Washington Village Outlet kunotenga maruwa. Iyi nzira yokubudisa kunotenga musha Wurzburg Anozvirumbidza rakakura 110 omunharaunda uye dzomunyika pezvitsiga! The musha inongova 50 maminitsi kubva muFrankfurt kana 60 Maminitsi kubva muNuremberg. Panewo eateries wandei akuchengete vakakuchidzira kuti kunotenga kwako!
Get yepamusoro European mugadziri fashoni, midziyo, kana zvishongedzo zvekumba zve 30% kuti 60% zvishoma. Mazuva vagadziri kutsva yavo yakasara uye pamwaka zvinosara vari refu aenda. Factory nzira yokubudisa zvitoro zvino inowanzonzi ukatakata pakati wakajeka chiduku svikiro kadikidiki maguta. Uyewo kumativi mumadhorobha nzvimbo uye, nokuti zvose munoziva, pamwe zvakanaka musuo inotevera! Pikiniki uye chikwama chitsva chero munhu?
MuFrankfurt kuna Wurzburg Zvitima
MuNuremberg kuna Wurzburg Zvitima
Stuttgart kuna Wurzburg Zvitima
Bonn kuna Wurzburg Zvitima
Ready kuwana kusvetuka yako muchitima nokuda kutenga rwendo hwose? vimba Save A Train kuti iwe tikiti ikoko makasimba uye asina mari zvakavanzika. (More mari kunotenga!)
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Of The Best Shopping nehoro In Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-shopping-outlets-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#designerbrands #fashoni #outlets kunotenga